နှုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက် ”မှဲ့” ပါတဲ့သူတွေဆိုရင် ဒီလို့ အကျင့်တွေ ရှိတယ် - Barnyar Barnyar
နှုတ်ခမ်း တစ်ဝိုက်မှာ” မှဲ့” ရှိခဲ့ရင်နှုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက် ”မှဲ့” ပါတဲ့သူ အများစုဟာ သနားစရာ၊ ချစ်စရာ အလွန် ကောင်းကြပါတယ်။ သူတို့တွေဟာ အပြင်ပန်းမှာ ခက်ထန် ကြမ်းတမ်းတယ် ထင်ရပေမယ့် အတွင်းစိတ် သဘောထားကတော့ အလွန် နူးညံ့ သိမ်မွေ့ပါတယ်?
ပွစိပွစိလုပ်တာကတော့ ဝါသနာပါ :-p သူများကို ကူညီလိုက်လို့ ကိုယ့်မှာ သုညဖြစ်သွား ခဲ့ရင်တောင် ကိုယ်ကူညီလိုက်တဲ့သူ အဆင်ပြေနေတယ်ဆိုရင် ကြည်နူးပီတိ ဖြစ်နေတတ်တဲ့ သူတွေပါ နှုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက် ”မှဲ့” ပါတဲ့သူတွေဟာ စေတနာလည်း အရမ်းကောင်းသလို သံယောဇဉ်လည်း အလွန်ကြီးကြတဲ့ သူတွေပါ။ သူတို့ဟာ စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်လည်း လွယ်ပါတယ်။ ခဏခဏလည်း စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက် တတ်ပါတယ်
စိတ်ကောက်လည်း ခဏပဲ။ ချော့မယ့်သူရှိရင်တော့ ဟန်အမူပိုပြီး ဆက်ပြီးတော့ စိတ်ကောက်ဟန်… ဆောင်နေတတ်ပါတယ် ။ချော့မယ့်သူ မရှိရင်တော့ သူ့အလိုလို ပျော့သွားရော နှုနှုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက် ”မှဲ့” ပါတဲ့သူဟာ ချစ်သူအပေါ်မှာလည်း ကလေးတစ်ယောက်လို ဆိုးနွဲ့ချင်ကြပါတယ်။
အချစ်လည်း အရမ်းကြီးပါတယ် ဒါပေမယ့် အချစ်စိတ်ကြီးတော့ ဘယ်လောက်ကြီးတဲ့ အပြစ်ဖြစ်ဖြစ် စိတ်ရှည်သည်းခံပြီး နားလည်ခွင့်လွှတ် ပေးနိုင်တဲ့ သူတွေပါ။ ဒါပေမယ့် စိတ်ထဲမှာတော့ မတင်မကျနဲ့ အမြဲသံသယ ဖြစ်နေတတ်တယ်။ ဖြစ်ခဲ့သမျှ အတိတ်တွေကိုတော့ အမြဲ မမေ့ဖျောက်နိုင်ပဲ အမှတ်ကြီးတဲ့ သူတွေပါ။
နှုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက် ”မှဲ့” ပါတဲ့ သူတွေဟာ အများအားဖြင့် ကိုယ့် ဘဝကို စိတ်ညစ်စရာ ကောင်းတယ်လို့ ထင်နေတတ်ပါတယ်။ သူများ အကြည့်တွေကိုလည်း သည်းမခံနိုင်သလို သူ့ကို သူများတွေက စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုထင်နေမလဲ ဆိုတာကို အမြဲ သိချင်နေသူတွေပါ။
နှုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက် ”မှဲ့” ပါတဲ့သူတွေဟာ တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ့်ကိုယ်ကို….. တောင်o_O ယုံကြည်ဖို့ ခက်ခဲနေတတ်တယ်။ သူ့မှာ အတွေးအခေါ်ကောင်းတွေ ရှိနေတာတောင်… သူများစကားကို ယုံပြီး လက်ခံတတ်တဲ့အတွက် အလုပ်တစ်ခုကို လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း စဉ်းစားနေတာနဲ့ပဲ အချိန်ကုန်သွားတတ်တယ်။
@}-;-‘– @}-;-‘-လုပ်လိုက်တဲ့ ကိစ္စတစ်ခုဟာ အများအားဖြင့် ပြသနာဖြစ်မယ်၊ဆုံးရှုးံမယ် ဆိုပြီး မကောင်းတဲ့ဘက်ကပဲ အများအားဖြင့် တွေးလေ့ရှိတယ် ။နှုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက် ”မှဲ့” ပါတဲ့သူတွေဟာ ငြိမ်းချမ်းခြင်းကို မြတ်နိုးသူတွေပါ။
ဖြစ်နိုင်ရင် ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းပဲ ငြိမ်းချမ်းစွာ သာသာယာယာ နေသွားချင်ကြတဲ့ သူတွေပါ။
ငြိမ်းချမ်းရေးကို မြတ်နိုးပေမယ့်လည်း တောင်းပန်ရမှာကိုတော့ သေလောက်အောင် မုန်းတယ်။ သူအမှားတစ်ခု လုပ်မိပြီ ဆိုရင်လည်း နောင်တရမဆုံး ဖြစ်နေတတ်တာ နှုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက် ”မှဲ့” ပါတဲ့ သူတွေပါ♕ ♕ ❆
နှုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက် ”မှဲ့” ပါတဲ့ သူတွေဟာ သူတစ်ပါးအပေါ် မှာကျတော့….. ဦးစားပေးတတ်တယ်။ ..သနားတတ်တယ်။ အားနာတတ်တယ်။ဒါပေမယ့် ကိုယ့်မိသားစု အပေါ်မှာတော့ အနိုင်ယူချင်တယ်။
နှုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက် ”မှဲ့” ပါတဲ့ သူတွေကို ချစ်သူခင်သူလည်း ပေါသလိုအပေါင်းအသင်းလည်း များပေမယ့် ….အများအားဖြင့် တစ်ယောက်တည်း နေရတာကိုပဲ သဘောကျပြီး တစ်ယောက်တည်းပဲ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်
နှုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက် ”မှဲ့” ပါတဲ့သူတွေက ဒေါသကလည်း အရမ်းကြီးတတ်တယ်။ ဒါပေမယ့် တော်ရုံတန်ရုံ စိတ်မဆိုး တတ်ပါဘူး။ စိတ်ကလည်း အရမ်းမြန်တယ်။ သူမှန်တယ် ထင်ရင် ဘယ်သူ့ကိုမဆို ရင်ဆိုင်ရဲတယ်။ ဘာမဆို လုပ်ရဲတယ်။
ကိစ္စတစ်ခုကို လုပ်ချင်ပြီဆိုရင်လည်း ဇွတ်လုပ်တတ်တယ်။ သူ့ကို မခံချင်အောင်၊… ဒေါသထွက်အောင် မထိတထိ သွားလုပ်တဲ့သူတွေဆို …အရွဲ့ပြန်တိုက်ရမှကို ကျေနပ်တယ်။
စိတ်တိုနေပြီဆိုရင်တော့ မျက်နှာထားက တင်းတင်းနဲ့ တစ်လောကလုံး သူ့လုပ်စာကိုပဲ ထိုင်စားနေရသလို ဘယ်သူနဲ့မှကို စကား မပြောချင်တော့ဘူး
နှုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက် ”မှဲ့” ပါတဲ့သူတွေဟာ သူများအပေါ်မှာလည်း ကိုယ့် သိက္ခာ အကျခံပြီးတော့ကို ကူညီပေးတတ်တဲ့ သူတွေပါ။ မိသားစုနဲ့ ပတ်သတ်ရင်လည်း သံယောဇဉ်အရမ်းကြီးပြီး ခင်တွယ်တတ်တယ်။
နှုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက် ”မှဲ့” ပါတဲ့ သူတွေဟာ ချစ်သူအပေါ်မှာလည်း…. ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ကူးထက် ချစ်သူရဲ့ စိတ်ကူးကို ပိုပြီး ဦးစားပေး တတ်ကြပါတယ်။ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူကိုလည်း လိုတာထက် ပိုပြီးတော့ သဝန်တို တတ်ကြတယ်။ ပြီးတော့ စိတ်ထဲမှာ ရှိတာကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း မပြောရဲကြဘူး➳ ➳ ➳
နှုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက် ”မှဲ့” ပါတဲ့ သူတွေဟာ ချစ်သူကို အရမ်းချစ်သလောက် မြတ်နိုးသလောက် ဂရုစိုက်သလောက် ကြင်နာ သလောက် တွယ်တာသလောက် အလေးထားသလောက် နားလည်မှု တွေခွင့်လွှတ်မှုတွေရှိသလောက် အများအားဖြင့် သူ့ချစ်သူအပေါ် သူပေးနိုင်သလောက် ပြန်မရတတ်ကြပါဘူး
နှုတျခမျးတဈဝိုကျ ”မှဲ့” ပါတဲ့သူတှဆေိုရငျ ဒီလို့အကငျြ့တှေ ရှိတယျ
နှုတျခမျး တဈဝိုကျမှာ” မှဲ့” ရှိခဲ့ရငျ နှုတျခမျးတဈဝိုကျ ”မှဲ့” ပါတဲ့သူ အမြားစုဟာ သနားစရာ၊ ခဈြစရာ အလှနျ ကောငျးကွပါတယျ။ သူတို့တှဟော အပွငျပနျးမှာ ခကျထနျ ကွမျးတမျးတယျ ထငျရပမေယျ့ အတှငျးစိတျ သဘောထားကတော့ အလှနျ နူးညံ့ သိမျမှပေ့ါတယျ?
ပှစိပှစိလုပျတာကတော့ ဝါသနာပါ :-p သူမြားကို ကူညီလိုကျလို့ ကိုယျ့မှာ သုညဖွဈသှား ခဲ့ရငျတောငျ ကိုယျကူညီလိုကျတဲ့သူ အဆငျပွနေတေယျဆိုရငျ ကွညျနူးပီတိ ဖွဈနတေတျတဲ့ သူတှပေါ
နှုတျခမျးတဈဝိုကျ ”မှဲ့” ပါတဲ့သူတှဟော စတေနာလညျး အရမျးကောငျးသလို သံယောဇဉျလညျး အလှနျကွီးကွတဲ့ သူတှပေါ။ သူတို့ဟာ စိတျဆိုးစိတျကောကျလညျး လှယျပါတယျ။ ခဏခဏလညျး စိတျဆိုးစိတျကောကျ တတျပါတယျ
စိတျကောကျလညျး ခဏပဲ။ ခြော့မယျ့သူရှိရငျတော့ ဟနျအမူပိုပွီး ဆကျပွီးတော့ စိတျကောကျဟနျ… ဆောငျနတေတျပါတယျ ။ခြော့မယျ့သူ မရှိရငျတော့ သူ့အလိုလို ပြော့သှားရော နှုတျခမျးတဈဝိုကျ ”မှဲ့” ပါတဲ့သူဟာ ခဈြသူအပျေါမှာလညျး ကလေးတဈယောကျလို ဆိုးနှဲ့ခငျြကွပါတယျ။
အခဈြလညျး အရမျးကွီးပါတယျ ဒါပမေယျ့ အခဈြစိတျကွီးတော့ ဘယျလောကျကွီးတဲ့ အပွဈဖွဈဖွဈ စိတျရှညျသညျးခံပွီး နားလညျခှငျ့လှတျ ပေးနိုငျတဲ့ သူတှပေါ။
ဒါပမေယျ့ စိတျထဲမှာတော့ မတငျမကနြဲ့ အမွဲသံသယ ဖွဈနတေတျတယျ။ ဖွဈခဲ့သမြှ အတိတျတှကေိုတော့ အမွဲ မမဖြေ့ောကျနိုငျပဲ အမှတျကွီးတဲ့ သူတှပေါ။ နှုတျခမျးတဈဝိုကျ ”မှဲ့” ပါတဲ့ သူတှဟော အမြားအားဖွငျ့ ကိုယျ့ ဘဝကို စိတျညဈစရာ ကောငျးတယျလို့ ထငျနတေတျပါတယျ။
နှုတျခမျးတဈဝိုကျ ”မှဲ့” ပါတဲ့သူတှဟော တဈခါတဈလေ ကိုယျ့ကိုယျကို….. တောငျo_O ယုံကွညျဖို့ ခကျခဲနတေတျတယျ။ သူ့မှာ အတှေးအချေါကောငျးတှေ ရှိနတောတောငျ… သူမြားစကားကို ယုံပွီး လကျခံတတျတဲ့အတှကျ အလုပျတဈခုကို လုပျမယျဆိုရငျလညျး စဉျးစားနတောနဲ့ပဲ အခြိနျကုနျသှားတတျတယျ။
@}-;-‘– @}-;-‘-လုပျလိုကျတဲ့ ကိစ်စတဈခုဟာ အမြားအားဖွငျ့ ပွသနာဖွဈမယျ၊ဆုံးရှုးံမယျ ဆိုပွီး မကောငျးတဲ့ဘကျကပဲ အမြားအားဖွငျ့ တှေးလရှေိ့တယျ။
နှုတျခမျးတဈဝိုကျ ”မှဲ့” ပါတဲ့သူတှဟော ငွိမျးခမျြးခွငျးကို မွတျနိုးသူတှပေါ။ ဖွဈနိုငျရငျ ကိုယျတဈယောကျတညျးပဲ ငွိမျးခမျြးစှာ သာသာယာယာ နသှေားခငျြကွတဲ့ သူတှပေါ။
ငွိမျးခမျြးရေးကို မွတျနိုးပမေယျ့လညျး တောငျးပနျရမှာကိုတော့ သလေောကျအောငျ မုနျးတယျ။ သူအမှားတဈခု လုပျမိပွီ ဆိုရငျလညျး နောငျတရမဆုံး ဖွဈနတေတျတာ နှုတျခမျးတဈဝိုကျ ”မှဲ့” ပါတဲ့ သူတှပေါ♕ ♕ ❆
နှုတျခမျးတဈဝိုကျ ”မှဲ့” ပါတဲ့ သူတှဟော သူတဈပါးအပျေါ မှာကတြော့….. ဦးစားပေးတတျတယျ။ ..သနားတတျတယျ။ အားနာတတျတယျ။ဒါပမေယျ့ ကိုယျ့မိသားစု အပျေါမှာတော့ အနိုငျယူခငျြတယျ။
နှုတျခမျးတဈဝိုကျ ”မှဲ့” ပါတဲ့ သူတှကေို ခဈြသူခငျသူလညျး ပေါသလိုအပေါငျးအသငျးလညျး မြားပမေယျ့ ….အမြားအားဖွငျ့ တဈယောကျတညျး နရေတာကိုပဲ သဘောကပြွီး တဈယောကျတညျးပဲ ဖွဈနတေတျပါတယျ
နှုတျခမျးတဈဝိုကျ ”မှဲ့” ပါတဲ့သူတှကေ ဒေါသကလညျး အရမျးကွီးတတျတယျ။ ဒါပမေယျ့ တျောရုံတနျရုံ စိတျမဆိုး တတျပါဘူး။ စိတျကလညျး အရမျးမွနျတယျ။ သူမှနျတယျ ထငျရငျ ဘယျသူ့ကိုမဆို ရငျဆိုငျရဲတယျ။ ဘာမဆို လုပျရဲတယျ။
ကိစ်စတဈခုကို လုပျခငျြပွီဆိုရငျလညျး ဇှတျလုပျတတျတယျ။ သူ့ကို မခံခငျြအောငျ၊… ဒေါသထှကျအောငျ မထိတထိ သှားလုပျတဲ့သူတှဆေို …အရှဲ့ပွနျတိုကျရမှကို ကနြေပျတယျ။
စိတျတိုနပွေီဆိုရငျတော့ မကျြနှာထားက တငျးတငျးနဲ့ တဈလောကလုံး သူ့လုပျစာကိုပဲ ထိုငျစားနရေသလို ဘယျသူနဲ့မှကို စကား မပွောခငျြတော့ဘူး
နှုတျခမျးတဈဝိုကျ ”မှဲ့” ပါတဲ့သူတှဟော သူမြားအပျေါမှာလညျး ကိုယျ့ သိက်ခာ အကခြံပွီးတော့ကို ကူညီပေးတတျတဲ့ သူတှပေါ။ မိသားစုနဲ့ ပတျသတျရငျလညျး သံယောဇဉျအရမျးကွီးပွီး ခငျတှယျတတျတယျ။
ကိုယျခဈြတဲ့သူကိုလညျး လိုတာထကျ ပိုပွီးတော့ သဝနျတို တတျကွတယျ။ ပွီးတော့ စိတျထဲမှာ ရှိတာကို ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး မပွောရဲကွဘူး➳ ➳ ➳
နှုတျခမျးတဈဝိုကျ ”မှဲ့” ပါတဲ့ သူတှဟော ခဈြသူကို အရမျးခဈြသလောကျ မွတျနိုးသလောကျ ဂရုစိုကျသလောကျ ကွငျနာ သလောကျ တှယျတာသလောကျ အလေးထားသလောကျ နားလညျမှု တှခှေငျ့လှတျမှုတှရှေိသလောကျ အမြားအားဖွငျ့ သူ့ခဈြသူအပျေါ သူပေးနိုငျသလောကျ ပွနျမရတတျကွပါဘူး